Zarao ny rakitra PST lehibe ho rakitra kely kokoa - Torolàlana iray isaky ny dingana
Home Products DataNumen Outlook Repair Zarao ho rakitra kely kokoa ny rakitra PST lehibe
mampiasa DataNumen Outlook Repair hampisaraka ny rakitra lehibe amin'ny kely kokoa
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fifandraisana haingana sy ny fampahalalana manokana, ny rakitra Outlook PST, izay misy ireo angon-drakitra ireo, dia manitatra be koa. Noho izany, indraindray isika dia mila mizara ny rakitra PST lehibe ho kely, noho ireto antony manaraka ireto:
Ny haben'ny rakitra sy habetsaky ny entana marobe dia hitarika ho amin'ny hafainganam-pandeha miadana amin'ny asa maro, toy ny fikarohana, fivezivezena, sns.
Tsy manohana ireo kinova taloha Outlook (97 hatramin'ny 2002) rakitra lehibe kokoa noho ny 2GB, Ka raha mahatratra izany fetra izany ny rakitrao fa mbola te hampiasa azy amin'ny kinova taloha, dia ny fomba tokana dia ny fizarana azy ho farantsa kely.
Raha afaka miditra amin'ny atin'ny rakitra PST lehibe ao amin'ny Outlook ianao, dia afaka mampiasa Outlook mba hizara azy io amin'ny tanana.
DataNumen Outlook Repair afaka manampy anao hizara ny rakitra PST lehibe ho kely kokoa.
Fanamarihana: Alohan'ny hampisarahana ny rakitra PST be loatra amin'ny DataNumen Outlook Repair, akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa mety manova ny fisie PST.
Mandehana any amin'ny vakizoro, avy eo safidio ity safidy manaraka ity:
ary apetraho amin'ny sanda kely kokoa noho ny 2GB ny fetran'ny habe. Soso-kevitra ny hampiasa sanda iray sombiny 2GB fotsiny ka tsy hahatratra 2GB intsony ny rakitrao atsy ho atsy, ohatra hoe 1000MB. Azafady, mariho ny MB.
Miverena any vakizoro.
Amin'ny toerana misy anao, rahoviana DataNumen Outlook Repair scans ary mizara ny rakitra be loatra amin'ny loharano lehibe kokoa, ny fisie fisarahana voalohany dia xxxx_fixed.pst, ny faharoa dia xxxx_fixed_1.pst, ny fahatelo dia xxxx_fixed_2.pst, sns, izay misy xxxx no anaran'ny rakitra PST loharano Ohatra, ho an'ny rakitra PST loharanom-baovao Outlook.pst, amin'ny alàlan'ny default, ny rakitra voalohany nizara dia Outlook_fixed.pst, ary ny faharoa dia Outlook_fixed_1.pst, ary ny fahatelo dia Outlook_fixed_2.pst, sns.
Raha te hampiasa anarana hafa ianao dia azafady mifidy na apetraho mifanaraka amin'izany:
Azonao atao ny mampiditra mivantana ny anaran'ny fisie raikitra na tsindrio ilay bokotra hijerena sy hisafidianana ny anaran'ny fisie raikitra.
Azonao atao ny misafidy ny endrika fisie ny PST raikitra ao anaty boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra voafetra, ny endrika mety dia Outlook 97-2002 sy Outlook 2003-2010. Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Repair hiteraka ny rakitra PST raikitra mifanaraka amin'ny Outlook napetraka ao amin'ny solosaina eo an-toerana.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Outlook Repair start scanning the source PST file, sitrana ary angony ireo entana ao anatiny, ary avy eo apetraho ao anaty fisie PST raikitra ireo entana namboarina izay napetraka ao amin'ny Dingana 6. Hampiasa ny Outlook_fixed.pst ho ohatra iray izahay.
Rehefa mahatratra ny fetra voafetra ao amin'ny Dingana 2 ny haben'ny Outlook_fixed.pst. DataNumen Outlook Repair hamorona rakitra PST vaovao faharoa antsoina hoe Outlook_fixed_1.pst, ary andramo apetraka ao anaty fisie ireo entana sisa.
Rehefa mahatratra ny fetra voatondro ihany koa ny rakitra faharoa, DataNumen Outlook Repair dia hamorona rakitra PST vaovao fahatelo antsoina hoe Outlook_fixed_2.pst handraisana ireo entana sisa, sns.
Ao anatin'ilay dingana, ny bara fandrosoana
dia handroso mifanaraka amin'izany mba hanondroana ny fandrosoana misaraka.
Aorian'ny fizotrany, raha ny fizarana PST be loatra dia nozaraina ho rakitra PST vaovao kely kokoa, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny dia azonao atao ny manokatra tsirairay ireo rakitra PST misaraka tsirairay amin'ny Microsoft Outlook. Ary ho hitanao ireo entana rehetra ao amin'ilay fisie PST be loatra tany am-boalohany dia miparitaka amin'ireo rakitra fisarahana ireo.
Fanamarihana: Ny kinova demo dia hampiseho ity boaty hafatra manaraka ity mba hampisehoana ny fahombiazan'ny fisarahana:
Ao amin'ireo rakitra PST vaovao mizara, ny atin'ny hafatra sy ny fonosana dia hosoloina fampahalalana demo. Mba miangavy re manafatra ny kinova feno hahazoana ny tena atiny.
Zarao ho rakitra kely kokoa ny rakitra PST lehibe